Tsy hay na iniana aely fa ireo olona efa nanongam-panjakana tamin’ny taona 2009 ihany no voatonona ho ao ambadik’izay. Ny tsikaritra dia mangina sy tsy re feo mihitsy i Andry Rajoelina na dia voatonotonona ao anatin'ity resaka ity aza ny anarany. Mpanao politika, manamboninahitra am-perinasa sy efa nisotro ronono ary mpitondra fivavahana no ambara fa miara-mikotrika ity hetsika ity.Ny 15 janoary 2017 no voalaza fa hirodana izao fitondrana izao, raha ny resaka voizina ihany. Mety efa fantatry ny mpitandro ny filaminana ny hetsika ary lazaina mihitsy aza ny toerana nikotrehana azy: Anjozorobe, Ambatobe, Toamasina no efa nisian’ny fivorian’ireo mpitarika. Nahoana anefa no tsy mbola nisy olona na iray aza nampanantsoina na nosamborina ? Ny alahady 2 oktobra dia efa nisy ny resaka navoaka tamin’ny fisian’ny fikononkononana fanonganam-panjakana ara-miaramila fa tsy nahomby. Tsy nisy na iray aza nosamborina. Tsy navela nivoaka tany anaty toby fotsiny ny miaramila. Ny fanjakana Rajaonarimampianina mihitsy ve no efa malemy sy tsy mahatoky tena sa misy marina ve ny ketrika fanonganam-panjakana ataon'ireo izay efa voky traikefa amin'izany ka mahatonga ny anaran'ny filohan'ny tetezamita teo aloha ho voatonotonona tato ho ato izay ka toa hoe manomboka mampiahiahy ny ao ambonimbony ao ?